မိမိဘလော့ copy ကာကွယ်နည်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
မိမိဘလော့ copy ကာကွယ်နည်း
ဒါလေးကေတာ့ မိမိတိ်ု့ ဘလော့ပေါ်က စာပေများ ကို ကော်ပီယူတာ ကာကွယ်ခြင်တယ်ဆိုရင်
သုံးတဲ့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးပါ.. အောက်က ကျနော် ပေးထားတဲ့ ကုဒ်တွေကိုဘဲ ဘလော့မှာ ထည့်ပေးလိုက် ယုံပါဘဲဗျာ...
1. Login လုပ်လိုက်ပါ ဘလော့ကာကို
2. Layout ကိုကလစ်ရပါ့မယ် မိမိတို့ Dashboard ကနေပေါ့
4. AddaGadget ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ
6. အောက်ကပေးထားတဲ့ ကုဒ်တွေကို ကော်ပီယူ ထည့်လိုက်ပါ
document.oncontextmenu=new Function("muter2();return false");
အနီရောင်ပြထားတဲ့ နေရာမှာ မိမိတို့ အမည် ပြောင်းလဲ ပေးပါ။ ဒါဆို ကော်ပီ လုံးဝ ယူမရတော့ပါ။
အောင်အောင်(မကစ) ရဲ့ ဘလော့ခရီးသည်လေးအား အားပေးနေကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.. တုန့်ပြန်မှုအနေနဲ့ fb like လေးတော့ လုပ်ပေးခဲ့ကြပါနော်.. တတ်စွမ်းသမျှ တွေ့ ရှိသမျှလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေနေပါ့မယ်...။ အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ပါက... www.aungsanmks.blogspot.com www.ledimyethar.com တို့ရဲ့ cbox မှာ ပြောခဲ့ကြပါနော်...